लगभग सबैको आफ्नो जीवन कान दुखाइ कम से कम एक पटक भएको थियो। यो अनुभूति स्पष्ट छैन एक सुखद छ। दुखाइ को सबै भन्दा बारम्बार घटना - कान पानी प्राप्त। , नुहाउनु लिइरहेको बेला नदी बेसिन वा स्नान मा स्नान यो हुन सक्छ। तपाईंले अक्सर सुन्न सक्नुहुन्छ समुद्र तटीय धेरै पर्यटकहरु: "। earache समुद्रमा डाइभिङ पछि" कुनै पनि कार्य यस अवस्थामा लिइएको छ भने, यो जो सामना गर्न त सजिलो छैन, प्राप्त गम्भीर जटिलताहरू को likelihood बढ्छ।
हाम्रो कान पानी प्रवेश विरुद्ध कुनै प्राकृतिक सुरक्षा छ। जोडदार पौडी, यो बीचमा कान मा penetrates गहिराई मा डाइभिङ, tympanic पुगन विभाजन स्तर संग। यस मामला मा झिल्ली एक बाड समारोह वहन। यदि डाइभिङ पछि कान दुख्यो, त्यसपछि यसलाई साथ पानी समातिए जीवाणुहरु र सूक्ष्मजीवहरु संग।
तरल अलिकति खस्दा पनि, हामी कान मा विशेषता gurgling र बेचैनी महसुस। फन्दामा पानी एउटा सानो रकम spontaneously प्रवाह गर्न सक्षम छ, हामी मात्र टाउको झुकाव आवश्यक छ। यो उत्पन्न गर्छ जहाँ छैन मामला मा, कान मा बाँकी तरल, यो सुनिंनु फलस्वरूप, गंभीर दुखाइ provokes र। कहिल्यै यो अवस्था अनुभव छ जो कोहीले, थाह दुखाइ कहिले काँही असह्य छ आफैले र एक डाक्टर को मद्दत बिना गर्न सक्नुहुन्न।
को दुखेको कान डाइभिङ पछि, डाक्टर निदान गर्दा, यी लक्षण टिप्पण गर्दा, वाक्यांश "पौडीबाज गरेको कान" दलदल:
कान खण्डमा वरिपरि बेचैनी क्षेत्र;
को सुनिंनु parotid Tissues;
गोले को माथि लक्षण पृष्ठभूमि विरुद्ध पीप ooze सक्छ। यो साइन बलियो भडकाऊ प्रक्रिया, जो आफ्नो श्रवण गम्भीर परिवर्तन हुन सक्छ संकेत गर्छ। आत्म, यो डाइभिङ पछि कान दुख्छ र त्यहाँ पीप हुँदा, कडाई निषेधित छ। यस्तो लापरवाही गम्भीर जटिलताहरू, माथि श्रवण को हानि गर्न सक्छ।
सहायताको लागि एक बाल विशेषज्ञ रूपमा साँघुरो विशेषज्ञता को डाक्टर सम्पर्क गर्नुपर्छ र एक चिकित्सक सधैं योग्य यस विषयमा छ। कान निको डाक्टर Otolaryngologist (ENT) को रोगहरु। उहाँले eardrum को राज्य सहित एक परीक्षा कान नहरहरुमा एक चिकित्सा otoscope प्रयोग। बारम्बार यो विशेषता को डाक्टर उजुरी पछि डाइभिङ कान दुख्छ कि सुन्न। यस्तो अवस्थामा के गर्न, डाक्टर रोगी गर्न विस्तृत व्याख्या हुनेछ। तिमी अगाडी परीक्षा आवश्यक छ भने, एक एक्स-रे गर्न प्रस्ताव।
यदि एक गोता पछि earache, यो कसरी व्यवहार गर्न, केवल एक डाक्टर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। निरीक्षण र एक्स-रे केलाउँदा, एक विशेषज्ञ यो मामला मा उपयुक्त हो जो लागूपदार्थको निर्धारण गर्नेछ।
सबै को पहिलो यो एउटा अपरिवर्तनीय सुनिंनु थाले सम्म सबै संचित पानी हटाउन आवश्यक छ। लक्ष्य नरम कपास flagella फिट हासिल गर्न, तर तिनीहरूले ध्यान दिएर प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यो उद्देश्य लागि कपास तन्तु आन्दोलन तीव्रता को eardrum बिगार्न वा गहिरो सल्फर मा धक्का सकिन्छ, उपयुक्त छैन। केही विरामीहरु यो कुनै पनि महत्व संलग्न छैन, तर व्यर्थमा। को सल्फर सम्पर्क मा, auricle मा संचित कि तरल सुनिनु गर्न tends संग कृपया सजग हुनुहोस्। Sodden cerumen मात्रा मा वृद्धि र बेचैनी हुन सक्छ। सायद यो किन हो, र डाइभिङ पछि earache। यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवहार गर्ने?
सुनिंनु कम र कान घटेको दुखाइ कम जो तपाईं कुनै पनि फार्मेसी मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, मद्दत गर्न सक्छ। अझै यो आत्म-medicate छैन आवश्यक छ। तपाईं कुनै पनि विशिष्ट लक्षण otorhinolaryngology गर्न योग्य मद्दत खोज्न आवश्यक छ भने, यो सम्भव जटिलताहरू जोगिन हुनेछ।
जहाँ देखिने purulent छुट्टी र रोगी टिप्पणीहरू डाइभिङ पछि कान दुख्छ कि, ENT नियुक्त सफाई खण्डमा प्रक्रिया मामला मा, जो केवल व्यावसायिक प्रदर्शन गर्न सक्छन्। पीप एक कपास swab संग कान नहर शुद्ध र यो दवादारू निस्संक्रामक गुण खन्याउन हुनेछ।
otitis मिडिया को उपचार को लागि सबै भन्दा साधारण लागूपदार्थ विचार गर्नुहोस्। यी समावेश:
यी सबै लागूपदार्थ विरोधी भडकाऊ र analgesic गुण, तर यो कुनै पनि दबाइ केही साइड इफेक्ट हुन सक्छ कि सम्झना हुनुपर्छ। त्यसैले, तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु अघि, तपाईं ध्यान दिएर कि दबाइ आएका निर्देशनहरू पढ्नुहोस् गर्न आवश्यक छ।
वृद्ध पुस्ता को सदस्य अक्सर बोरिक रक्सी समाधान को otitis compresses को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ। एक अस्पताल सेटिङ प्रयोग समाधान furatsilina रक्सी salicyl "sulfacetamide"।
लोक उपचार को प्रयोग
लोक बुद्धि, दुखाइ को उपचार उनको प्रविधी र व्यञ्जनहरु लागि विकसित गरेको छ एक भन्दा बढी पुस्ता परीक्षण गरे। तसर्थ, डाइभिङ पछि भने earache, के गर्न यो जस्तै अवस्थामा, हाम्रो हजुरआमा थाहा छ। शताब्दीयौंदेखि लोक उपचार भनेर कान मा दुखाइ मद्दत खाद्य पदार्थ को एउटा सानो सूची छ, विभिन्न रोगबाट उपचार गर्न प्रयोग गरिएको:
उबला धनुष boleutolyayusche संचालित।
रातो चुकंदर को रस को केही घटेको दुखाइ कम।
Camomile क्षेत्र, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गुण भएको, सुनिंनु हटाउनु।
मुख्य कुरा हो - त्यहाँ एक थियो भने भनेर मनमा राख्न पनि tympanic झिल्ली को बिच्छेद, यी व्यञ्जनहरु सकारात्मक प्रभाव छैन। तिनीहरूले मात्र एक सानो सुनिंनु हटाउन सक्षम छन्।
earache भने के डाइभिङ पछि छोराछोरीको?
बच्चाहरु पानी उपचार, विशेष गरी समुद्र तट छुट्टी प्रेम। तिनीहरूले र कान मा पानी उजागर गर्न सकिन्छ किन छ जो गोता, खिलवाड। यस तरल पदार्थ समयमा हटाइएको छ भने, अक्सर ज्वरो र suppuration सँगसँगै छ जो भडकाऊ प्रक्रिया, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। को दुखेको कान बच्चा मा डाइभिङ पछि, बन्द डाक्टर एक यात्रा यदि असम्भव छ।
वयस्क को उपचार को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि दबाइहरु, सधैं बच्चाहरु को लागि उपयुक्त हो, त्यसैले यो एक विशेषज्ञ परामर्श गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं कान खण्डबाट तरल पदार्थ फिल्टर सफा गर्न आवश्यक पर्दछ, र यो आफ्नै अव्यावहारिक बनाउन।
जब पीडादायी भावना हराएको समय मात्र सुन्न क्षमता को हानि गर्न सक्छ कि जटिलताहरुलाई विकास गर्न योगदान किनभने, डाक्टर गर्न भ्रमण ढिलाइ छैन।
म प्वाल मा नाक न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ? जब sinusitis नाक खुसीले गदगद वा गर्न सकिन्छ?
यदि मल मा बिरालो गरेको रगत
वृद्ध मा चक्कर आना को उपचार। कारण, लक्षण, दबाइ
आंतों amebiasis: निदान र उपचार
जिगर गर्न मेटास्टेसिस: उपचार। कलेजो metastases: कारण, लक्षण र उपचार विशेषताहरु
करङहरु को भंग लागि पहिलो सहायता। भंग को चोट कसरी भेद गर्न
जीवनको लागि शक्ति र ऊर्जा कहाँ छ?
"आनन्द" को लागि वर्ण: जस्तै देखिन्छ र के अर्थ छ। वर्ण "आनन्द" को छवि कहाँ राम्रो राख्न?
कोलेस्ट्रोल शरीर बाहिर प्राप्त कसरी? कसरी लोक उपचार वा औषधि को शरीर देखि कोलेस्ट्रल प्रदर्शन गर्न?
Nettle को मूल सलाद
दबाइ "Ascorutin": प्रयोग र उपयोगी गुणहरू लागि निर्देशन
रूस मा सैन्य पेशा